Phezu iCaspian Sea Amaholide: Uphenyo Kazakhstan, Dagestan futhi Astrakhan
ICaspian Sea - umzimba esiyingqayizivele yamanzi, okuyinto okufanayo angafaka isicelo amachibi (ngenxa indawo yayo yezwekazi), futhi ulwandle (noma usayizi ezindawo). Futhi iyindawo ozithandayo sokuzilibazisa izivakashi for the izakhamuzi waseYurophu nase-Asia. Ukuthandwa zokungcebeleka iCaspian Sea ugu ngenxa nje kuphela ukhululekile futhi ekhangayo, kodwa futhi indawo elula lwechibi. phezu iCaspian Sea Leisure (amazwana ngakho omuhle kuphela) izinkulungwane zabantu abavela emazweni ehlukene unyaka ngamunye. Kuyaphawuleka ukuthi iningi izivakashi wanelisa ngokugcwele izimo zokuphila, kanye emanzini. Lokhu kungenxa ubuhle namathafa, isimo sezulu esihle, amanzi ecacile namabhishi amahle.
ICaspian Sea e Kazakhstan
Kazakhstan kanini ekubeni kukhethwa izivakashi vacation yawo yaminyaka yonke. Futhi lokhu kungenxa isimo nhlobo izivakashi yasekhaya. Izwe usalokhu uyimfihlakalo Russian Kazakhstan. Aphumula ngosuku lwayo yoLwandle iCaspian endaweni has eziningi eziwusizo, kuhlanganise ongaphakeme amasevisi izindleko endaweni yokulala, asikho isidingo ama-visa, inombolo encane izivakashi kokukhipha. Futhi inzuzo enkulu kuyinto ugu ezikhangayo futhi zikhululekile.
Ukuze uqale, kufanele kuphawulwe ukuthi inkathi evumayo for the holiday iqala ngo-May ihlala kuze kube sekupheleni September. Isimo sezulu kuleli esifundeni Kazakhstan nokulinganisela ezahlukene esiphezulu lokushisa + 30 ° C. Amanzi lifudumeza i uphawu isilinganiso + 26 ... + 27 ° C. Futhi we nothi ukungabi khona isikhathi eside izimvula isizini, oqinisekisa ukuhlala ukhululekile futhi ukuphumula. Uma sicabangela lezi zindlela, izwe ekahle iholidi kuzokwenza Kazakhstan. phezu iCaspian Sea zamaholide kuphela zijabulise! Lokhu kufakazelwa lenqwaba izivakashi ayebatshele zona. Abantu ukugubha isevisi enhle kakhulu, isimo sezulu esihle futhi efudumele, futhi okubaluleke kakhulu, amanzi ahlanzekile.
Makalale Aktau (Kazakhstan)
Abalandeli lokuphumula elihlale kufanele sinake emzini Aktau. Yilokho iseluleko sakhe izivakashi. Bayaqiniseka ukuthi kule ndawo eziphelele kakhulu kohlala phezu yoLwandle iCaspian. Izimpendulo ngaye ezingaphezu kuka evumayo. Dumisani izihambi, imfudumalo nenduduzo. Kuyinto resort ngobukhulu, ayihlomele ogwini yoLwandle iCaspian kuleli zwe. Inani elikhulu amahhotela isabelomali, kanye nokuthuthukiswa umkhakha kwamasiko izohamba ocacile esimnandi. Okuwukuphela ethile, okuyinto ephawuleka izivakashi e ukubuyekezwa kwawo - the enamadwala lolwandle. Ngo Aktau, isifunda ifakwe emadolobheni amancane resort. amathuba abo abalulekile kukhona isimo esizolile, umoya ohlanzekile futhi elinamanzi ebhishi anesihlabathi.
I iCaspian coast Astrakhan
Uma isihambi ngifuna ukuchitha yakho ehlobo iholide mnandi futhi engabizi, ukuthi Astrakhan ukhetho ephelele. Kungani? Zikhona izinzuzo eziningi. Chief phakathi kwabo: indawo, ezokuthutha kanye nengqalasizinda. Izibuyekezo zezivakashi ukuphakamisa ngempela ukuthi ushiye ishibhile njengakwezinye izindawo.
Ngakho, kabanzi mayelana emzini Astrakhan. phezu iCaspian Sea iholide lapha kuzodlula kahle. Lokhu kungenxa yokuthi leli yokungcebeleka Russian inama esiyingqayizivele ukuxhumana izilwane zasendle ezikhangayo futhi yesimanje nokunikela amabhishi. Banikezwe inqwaba izivakashi yonyaka, Astrakhan kahle isakhula yezokuvakasha, alinikela amaholide ezihlukahlukene lolwandle ukuzilibazisa, nightlife, kanye nokuvakashela izindawo ezindaweni ezithakazelisayo.
Umuzi abakwazi ukuqhosha inqwaba amahhotela izivakashi, kodwa ngasogwini eduze ifakwe nokungcebeleka. Ezinye anemisila yesimanje eliphezulu liphumele izakhiwo, kuyilapho abanye inqwaba yangasese amakhaya okunethezeka. Phakathi ezikhanga kakhulu ukuzilibazisa izikhungo kuzomele sifake, njengokuthi "Golden Lotus", "Lighthouse" futhi "Berezhok". Kuyinto kulezi izikhungo ukuwethamela 100% ukuzijabulisa yoLwandle iCaspian. Izibuyekezo zabantu uqinisekise lesi. Jwayelana nokushelela inkonzo futhi ungakwazi ukubhuka amakamelo kusengaphambili ngocingo.
Umugqa nogu lolwandle e Dagestan
A nhlanganisela eyingqayizivele sendawo nezici zemvelo uqhosha Dagestan, lapho okusezingeni eliphezulu entabeni eweni cishe ukufinyelela yoLwandle iCaspian. Lena option best for labo abafisa ukuhlanganisa esebenzayo entabeni iholide futhi ukuqamba amanga obunokuthula ogwini olunesihlabathi. An uhambo ezithakazelisayo kungase kubonakale Dagestan. phezu iholide iCaspian Sea endaweni ngeke ngempela kube okhumbuleka!
Derbent kuyinto inani elihle kunawo resort edolobheni, ezizohlinzeka izivakashi ukuhlala ocebile futhi zikhululekile. Kutholwe emaphethelweni namagagasi efudumele yoLwandle iCaspian, le ndawo futhi isikhumbuzo kazwelonke kwamasiko, izindonga okuyinto ezigcinwe izinqaba ephakathi, izinqaba ubudala, kanye nezibonelo abatelekile bokwakha yobuhlanga. Iqembu izinkambo, ihlelwe ensimini ka resort, ngeke nje bajwayelane izici of isimo, kodwa futhi ukuze uthole isithombe esinemibala-albhamu yomndeni.
phezu iCaspian Sea Leisure (libuyekeza ukubonakalisa ngokugcwele zonke izici zayo positive) - leli yithuba ukuchitha umndeni iholide ezishibhile, ujabulele amagagasi efudumele ogcwele isihe, isandla esivulekile ilanga segolide. Libuye libe yithuba elihle shí uhla imisebenzi lolwandle nezinhlobo resort eziphilayo.
KwaseSaransk: izikhangibavakashi ngezithombe, iminyuziyamu kanye namasonto. Yini ukubona e kwaseSaransk?
Oceanarium ngesikhathi Clean Ponds: ikheli, ukubuyekezwa, iwebhusayithi olusemthethweni
Kuphi ukuhlala ubusuku bonke M4? Road ezokuvakasha
Kiev, Kherson: uhambo yonkana expanses Ukraine
Yini igama intaba ephakeme kunazo ekhatsi Bashkortostan?
Isidlo Rich - imbande yenkomo. Indlela yendabuko ukupheka ezihlukahlukene iresiphi eyisisekelo
Bloodroot ophuzi. ezihlabayo zokuhlobisa
Izinkinga Vision? Awazi ukuthi ungayithola kuphi izibuko noma ama-contact lens? Ungasiza "Centre efanele" Petrozavodsk
Indlela yokwenza nehange izikebhe PVC ngezandla zakhe? Iziyalezo umdobi
Ubhontshisi Green: zokupheka
Louis-Bar syndrome: Izimpawu, Sifo Nokuselapha
E-Italy, Spa Isikhungo: incazelo
Mole - izinambuzane etotoswayo ne uhlamvu
Italy ogwini. coast Adriatic lase-Italy. coast Ligurian-Italy